Goorma ayey bilaabmi doontaa dhoofinta Bariga Express? | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia06 AnkaraGoorma ayey bilaabmi doontaa dhoofinta Bariga Express?
21 / 05 / 2020 06 Ankara, 36 Kars, Gobolka Central Anatolia, tareenka, Gobolka Waqooyi Bari, GUUD, Headline, TURKEY
Goorma ayaa caddayn deg deg ah la bilaabi doonaa?
TCDD Tasimacilik waa arin wax laga ogaan karo marka adeegyada Eastern Express, Touristic Eastern Express iyo Van Lake Express, oo shaqada looga joojiyey cudurka faafa ee coronavirus, ay bilaaban doonaan. Duulimaadyadii tareenka ee socotada, sawir qaadayaasha iyo xiiseeyayaashu ay ku faraxsan yihiin waxay dib u bilaaban doonaan bisha Juun haddii aan wax isbedel ahi dhicin.
Koox ahaan, socotada, sawir qaadayaasha, iyo taageerayaasha kaqeyb qaadan doona barnaamijka East Express, Dalxiisyada Eastern Express iyo Van Lake Express adeegyada tareenku waa inay taxaddar badan muujiyaan inta safarka lagu jiro dartood Covid-19 oo dillaacay.
Sababtoo ah dillaaca Covid-19, xeerar qaarkood ayaa la soo saaray oo ay tahay in lagu raaco tareennada. Sidaas awgeed, tareenadu waxay qaadi doonaan rakaab leh awood boqolkiiba 50 ah. Rakaabka aan xirneyn looma qaadi doono tareennada. Rakaabku waxay heli doonaan tigidhada kahor. Kaliya wuxuu ku fariisan doonaa kursiga ay iibsadeen. Ma awoodo inuu ku fadhiisto kursi kale. Ma jiro wax isbeddel ah oo ku yimaadda qiimaha tikidhada. Daawada tareenka ayaa ku jiri doonta. Sida loogu safro qolalka hurdada ee koox ahaan loo yaqaan 'Eastern Express', tareenka Dalxiiska ee Eastern Express iyo tareenka Van Lake Express ayaa caddaan doona ka dib go aanka lagu bilaabay. Lama oga sida uu adeeggu u noqon doono baabuur-warkooda ee Express Express.
Eastern Express wuxuu maalin walba socodsiiyaa inta udhaxeysa Ankara-Kars-Ankara wuxuuna ka kooban yahay jilaa, fadhiga sariirta daboolan iyo gaariga cuntada. Gawaarida Couchette waxaa ku yaal 10 qaybood waxaana 4 qof ku safri kara qol walba. Xaashiyaha, pique iyo barkinta waxaa bixiya TCDD Tasimacilik AS, iyo kuraasta ku yaal qolka waxaa loo isticmaali karaa sariir markii la codsado. Gaariga qadada wuxuu leeyahay 14 kursi oo u dhexeeya 47-52 kursi. Dogu Express waxay dhameystirtaa safarkooda inta udhaxeysa Ankara iyo Kars ku dhawaad ​​24 saac.
Khariiddada Wadada Cad ee Bariga
Waa kuwan shuruucda cusub ee lagu adeegsan doono tareennada
Shuruucda qaarkood ayaa lagu dabaqi doonaa "xilliga kala guurka". Kuwani waa sida soo socota:
Tareenadu waxay qaadi doonaan rakaab leh awood boqolkiiba 50 ah.
Rakaabka aan xirneyn looma qaadi doono tareennada. Rakaabku waa inay la imaadaan maaskaro.
Rakaabku waxay heli doonaan tigidhada kahor. Kaliya wuxuu ku fariisan doonaa kursiga ay iibsadeen. Ma awoodi doono inuu ku fadhiisto kursi kale.
Ma jiro wax isbeddel ah oo ku yimaadda qiimaha tikidhada.
Tareennada waa la jeermi doonaa.
Tareenadu waxay yeelan doonaan fadhiyo faaruq ah oo caafimaadka ka dambaysa maraakiibta ”
Tareenada ayaa sidoo kale ka shaqeyn doona 50 boqolkiiba awooda. Dhab ahaan waxaa jiri doona kuraas faaruq ah caafimaadka. Taageero maaliyadeed iyo mid maskaxeed ayaa loogu baahan yahay muwaadinku si uu ula qabsado muddada cusub. Waa lagama maarmaan in la bixiyo allabaryo si dib loogu helo. Sida laga soo xigtay cilmi baaris, diyaaradda ma awoodo inay qabato tirooyinka bisha Janaayo xitaa xilli ciyaareedkan sanadka soo socda. Waxaa jira tirooyin la mid ah tareenka. Nolosha ummadu hadda way is beddeli doontaa.
Codsiga Koodhku wuxuu ka bilaabmay Safarada Tareenka
Wasiirka caafimaadka Fahrettin Koca ayaa ku dhawaaqday in dalabka codeynta Hayat Eve Sığar (HEPP) ay bilaabatay kuwa doonaya inay ku raacaan gaadiidleyda dadweynaha sida diyaaradaha, tareennada, basaska loo adeegsado cabbiraadda cudurka Coronavirus (Covid-19).
Waa maxay HES Code-ka iyo Sidee loo Helaa?
Wasiirka Caafimaadka, Koca, wuxuu caddeeyay in safarradan hadda lagu sameyn karo lambarka HES, la siin doono kantaroolka koodhka HES, oo leh astaamo u imaan doona barnaamijka "Hayat Eve Sığar". Xaaladda halista ah ee dhammaan rakaabka duullimaadyada waxaa lagu weydiin doonaa lambarka 'HEPP code' 24 saacadood kahor duulimaadka gudaha. " Wasiirka Koca wuxuu yidhi, “Shakhsiyaadku waxay awood u yeelan doonaan inay muujiyaan inaysan qatar ku jirin, aysan jiranayn ama xiriir la lahaan karin codsigan Hayat Eve Sığar. Waxaan marka hore ku tababarandoonaan gadiidka isku xirka. Waxaad awood u yeelan doontaa inaad raacdo diyaarad oo aad ku tababarto adoo isticmaalaya koodhka aad ku heli doontid adigoo adeegsanaya dalabka moobiilka. ” ayaa yidhi.
Waa maxay HES Code?
Koodhka HES waa koodh la soo saari doono oo leh astaamo u imaan doona barnaamijka moobiilka "Hayat Eve S mobilear". Iyadoo lagu saleynayo koodhkan, baaritaanka mudnaanta leh ayaa la sameyn doonaa waxaana la go’aamin doonaa in rakaabka la aqbalo iyo inkale. Safarka diyaaradda iyo tareenka waxaa lagu samayn karaa iyadoo la adeegsanayo nambarkan.
Wasiirka Fahrettin Koca; Kordhinta koodhka HEPP ee shaqsiyan la soo saaray waxay noqotay mid qasab ah ilaa 18 may 2020. Su'aalaha HES code-ka, lambarka Aqoonsiga rakaabka (TCKN, Baasaboor iwm.), Macluumaadka lagaala soo xiriiri karo (labadaba taleefanka iyo emaylka) iyo taariikhda dhalashada ayaa la gelin doonaa si sax ah iyo gebi ahaanba goobaha loo baahan yahay.
Khadka Khadka Bariga Express
Goorma ayey Socdaallada Yididka bilaabi doonaan?
Wuxuu sheegay in kuraasta tareenada loo habeeyay si loo habeeyo masaafada u dhexeysa kuraasta iyada oo la raacayo isbeddelka xeerarka masaafada bulshada ka dib markii YHT Coranavirus uu maamusho TCDD Taşımacık AŞ. Tigidhada tikidhada duullimaadyada ee loo yaqaan 'NYT', oo bilaaban doona badhtamaha bisha Juun, ayaa mar kale ku jiri doona internetka.
Goorma ayaa la bilaabi doonaa duulimaadyada YHT ee Konya-Istanbul?
Marka ay bilaabaan adeegga taraamyada ee Konya
Goorta la bilaabayo adeegga tareen ee Balikesir
Goorma ayey Istanbul duullimaadyada Ankara YHT bilaabi doonaan?
Goorma ayuu Adeegga Tareenka Adapazarı bilaabi doonaa?
Sida loo Helo HES Code
Waa maxay HES Code
-Xawaaraha sare ee map waddada tareenka ee Turkey
Codsiga Codsiga Safarka Tareenka
Tallaabooyinka Coronavirus ee tareenka
Ololaha Gobolka Express ee Ololaha Dib-u-bilaabida 2013
Goorta la Bilaabayo Nidaamka Tareenka Nidaamka Fudud ee Trabzon
Mashruuca Trabzon Light Rail System wuxuu bilaabi doonaa goorta